Dhibta iyo Dheefta Madaarka Cigaal: Qaybtii 2aad. W/Q Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi) |
Dhibta iyo Dheefta Madaarka Cigaal: Qaybtii 2aad. W/Q Siciid Maxamuud Gahayr (Hargeysaawi)
Bishii Disember ee sannadkii 2015ka ayaanu si waafi ah isu wareysannay masuul ka tirsan Madaarka Hargeysa, annaga oo wadaagnay xogaha dahsoon iyo xaaladaha ka jira gegada diyaaraduhu ka haadaan, marka laga yimaaddo adeegga guud ee uu shacabka u qabto, jaallahani waxa uu ii sheegay in gegada Cigaal ay tahay meel ay dano gaar ah ka fushadaan masuuliyiin ka tirsan Xukuumadda Somaliland iyo Wasaaradda Duulistu. “Waxa si sharci-darro ah looga dhoofiyaa dad tegaya dhulal uu qalalaase ka jiro, waxaana laga qaadaa $1000 qofkiiba. Ragga qaar ayaa maalintiiba ku xisaabtama $2000.
Si loo qariyo halka ay tegayaan, waxa loo jaraa tigidh been-abuur ah, kaas oo muujinaya inay waxbarasho u socdaan” ayaa uu yidhi masuulkani. Marka arrinku sidaas yahay, miyaan la odhan karin “Madaarkii Cigaal waxa uu u gacan-galay Magafeyaal ku naaxa dhiigga shacabka Somaliland? Miyaanay gegada diyaaraduhu dib-u-xoreyn u baahnayn?”
Dhanka dakhliga, waxa uu dharaar kasta oo saaraa lacag gaadhaysa kumannaan kun oo doollar, oo isugu jira cashuuraha diyaaradaha laga qaado, lacagta dhoofayaasha iyo soo-degayaasha la xisaabiyo, lacagaha rarka laga qaado, lacagta dal-ku-galka IWM. Haddana ma jirto wax adeegyada bulshada ah oo ay ka helaan dadka ka soo jeeda deegaanka iyo magaalada uu ku yaallo.
Waxa Somaliland caan ka ah sida ay bulsho kastaaba saamayn ugu leedahay khayraadka iyo dakhliga laga soo xareeyo dhulkooda.
1. Dadka Gobolka Saraar waxa ay diideen in Genel Energy ay dhulkooda shidaal ka baadho.
2. Buurta Siimoodi waxa ka aloosmay xiisado adag, kaddib markii la keenay niman Shiine ah oo macdanta ka ganacsada.
3. Lama mooggana xiisadda ka dhalatay dhismihii dekedda macmalka ah ee Ceel-gardi iyo Wareejinta dhagaraysan ee Marsada/Dekedda Berbera
4. Dawladda Hoose ee Gebiley waxa ay kab xooggan ka heshaa kastamka cashuuraha ee Kala-baydh.
Haddaba dadka ku nool waageerka madaarka Cigaal iyo caasimadda Hargeysa waxa lagu tilmaami karaa dad gob ah oo dulqaad leh, iyada oo aan la qaramaynnin dhulkii kale ee Somaliland ayaa ay si kalsooni leh u hibeeyeen Ishii Dhaqaale ee ay gacanta ku hayeen markii dalku xorriyaddiisa la soo noqday 1991kii. Waxaanu Madaarku si buuxda gacanta dawladda Somaliland u galay sannadkii 1997kii kaddib markii ay istaageen colaadihii sokeeye ee Hargeysa iyo Burco ka qarxay 1994kii.
Tan iyo markii gegada Cigaal la furay 1958kii waxa ay Gumeystihii Ingiriiska, Xukuumadihii Soomaaliya iyo dawladda Somalilandba ku siqayeen dhulka Madaarka, iyada oo aan mag-dhaw u dhigma hantida lala wareegay loo celinnin dadkii guryahooda, jagooyinkooda, xeryahooda iyo beerahooda laga fara-maroojiyay. Waxa aan ogahay in ay kooxo guul-wadeyaal ahi igu xoomi doonaan marka aan Madaarka Cigaal iyo hawlihiisa ka hadlo.
Haddaba waxa aan qormooyin kooban ku faallayn doonaa qaar ka mid ah dhibaatooyinka ku gedaaman Madaarka Cigaal iyo deegaanka uu ku yaallo, marka aan af-meerana waxa aan soo bandhigi doonaa sida loo maarayn karo tabashooyinka jira.
1. Sida laga arki karo Wareysigii Barnaamijka Madasha Siyaasiga ee Universal TV uu sannadkii hore ku bixiyay Wasiirkii Hore Ee Wasaaradda Duulista Hawada iyo Gaadiidka Cirka Somaliland ahna Wasiirka Madaxtooyada Md Maxamuud Xaashi Cabdi, waxa ay xukuumadda KULMIYE la wareegtay dhul qiimihiisu dhan yahay saddex boqol oo milyan oo doollar ($300,000,000), dadkii laga qaadayna waxa lala galay heshiis-beenaad, lamana garanayo xilliga loo samaynayo dhul-beddel ama la qiimaynayo hantida laga qarameeyay. Waxa la-yaab ah in meelo laga leexiyay siliigga madaarka, kuwaas oo la siiyay dad xilal ka haya Wasaaradda Duulista. Illaa hadda inta aanu ognahay waxa af-garad lala gaadhay dad kooban.
2. Madaarka waxa la durkiyay laba jeer oo hore, iyada oo aan cidna waxba la weydiin ayaa haddana mar saddexaad la ballaadhiyay. Dadkii dhulkooda laga raray waxa lagu yidhi “Wixii dhul ah ma qiimaynaynno, wixii dhisme ah ayaanu qarashkooda celin doonnaa”. Waxa la kala furfuray dadkii guryaha ku lahaa, illaa haddana war sugan lagama hayo. Waxa aad mooddaa xukuumaddu in ay xalka ka deyayso muquunin, oo aanay marnaba maslaxaad iyo waanwaan oggolayn. Haddii aan shacab iyo dawladba laga wada arrinsan danta degaanka, dadka, dawladda iyo dalka waxa dhici karta in ay meesha ka qarxaan wax aan loo baahnayni.
3. Habdhaqanka Wasaaradda waxa aad mooddaa in uu yahay mid ku salaysan qabyaalad, oo ay sad-bursadaan beesha ay ka soo jeedaan Madaxweynaha iyo Wasiirkii hore ee Duulista Hawadu waxa ay gegada ka sameeyeen Dhagax-shiid (crusher) iyo Macrad gawaadhida lagu iibiyo/kireeyo waxaana leh cid ay isku jufo yihiin qoyska dalka ka arrimiya, Xayeysiiskana waxa ay ku xusaan shirkado gaar ah. Qaar ka mid ah ganacsiyadani waxa ay halis ku yihiin duullimaadyada diyaaradaha ka haada ama ka soo dega Madaarka Cigaal.
4. Qiiqa ka baxa dhagax-shiidka Cummaani ee Madaarku waxa uu waxyeello u geystay caafimaadka iyo nolosha dad badan oo ku nool Maxamed Mooge. Qoysas badan ayaa ka bara-kacay guryahoodii, kaddib markii ay u adkaysan waayeen boodhka/uurada/habaaska iyo ceeryaanta ka soo baxa dhagax-shiidku. Dadka deegaanku waxa ay ka tashanayaan sidii ay maxkamad ula tiigsan lahaayeen ninkan ku macaashay dhiiggii ummadda.
Karaasharkan waxa leh Ganacsade Cabdirisaaq Cummaani oo loogu abaal-guday dhismihii Madaarka Hargeysa iyo mashruucii ay bixisay dawladda Kuweyd. Dadweynaha Somaliland iyaga oo marag ka ah hantidii la sheegay in madaarka la geliyay iyo waxqabadkii koobnaa ee laga fuliyay, waxa u-qaadan-waa ah in weliba dhul ummaddeed gacanta loo geliyo, oo uu ka furo ganacsi aan habboonayn.
Hal-abuur arrinkaas ka hadlaya ayaa yidhi:
Isagoo afkii deyshay buu, dhiig dafirayaaye
Dusduskii Madaarkiyo findhicil, daammur lagu qooshay
“Waa dacaayad” baa lagu kaftamay, duulis faashiliye
Eeggana dariiqyada arliga, daanno loo boqorye
Dillaalow gabyaa aamusnaa, waa dalayn jigire
CHINA HORN dubaalado gankeed, dawlis ugu dheere
“Soo daaddah, dibaddiina baro, doobbiyada fuuqso”
Ayaxyada dawaafiyo ma-naxe, madhiye dooggiiye
Dameerkuba hallayntuu u jaqo, dooddu way garane
5. Saami-qaybsiga shaqaalaha iyo xilalka kale ee ka jira Madaarka Cigaal, Wasaaradda Duulista Hawada iyo guud ahaan Haayadaha ka hawl-gala Gegada diyaaraduhu waxa uu duudsi ku yahay ummadda Somaliland. Taasna waxa masuul ka ah Wasiirkii Hore ee Duulista Hawada Maxamuud Xaashi Cabdi, xilalka ay beeshiisu haysana waxa ka mid ah:Agaasimaha Waaxda Maamulka iyo Lacagta ee Wasaaradda Duulista, Agaasimaha Waaxda hab-maamuuska (Protocol) ee Wasaaradda Duulista, Maamule-ku-xigeenka Madaarka Cigaal, Taliyaha Saldhigga Madaarka Hargeysa, Taliyaha Laanta Socdaalka ee Madaarka Hargeysa iyo qaar kale.
Haddii aan qof ahaan u muujiyo sida ay ii taabteen shaqaalahan cunsuriyadda iyo caadifadda lagu keenay, 21kii Julaay 2014ka ayaanu madaarka Hargeysa isku maagnay wiil shaqaale ah oo ka soo jeeda beesha madaxweynaha, waxa judhiiba xabsiga i dhigay taliyaha rugta madaarka oo ka soo jeeda beesha madaxweynaha, arooryadii dambe ayaa la igu qaaday gaadhi sirdoon oo uu wade ka yahay nin ka soo jeeda beesha madaxweynuhu, waxa aan xaruntii sirdoonka Maroodijeex ugu tegay basaas ka soo jeeda beesha madaxweynaha oo maxbuus iska dhigaya.
Gabbood-falkaa maragga leh awgeed, waxa uu Akadamiga Waxbarasashada iyo Cilmi-baadhista (ERA) shahaadada qabyaaladda u guddoonsiinayaa Wasiirka Wasaaradda Madaxtooyada Somaliland Md Maxamuud Xaashi Cabdi oo masuul ka ah xidhitaanka dabinnada iyo gurraca aan ka warramay.
La soco qaybta saddexaad haddii Eebbe idmo
Facebook: Siciid Maxamuud Gahayr